'दिल खोलेर सकरात्मक कुरा श्वतपत्रमा आएको भएपूँजी बजारमा राम्रो सन्देश जान्थ्यो' : रौनियार - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘दिल खोलेर सकरात्मक कुरा श्वतपत्रमा आएको भएपूँजी बजारमा राम्रो सन्देश जान्थ्यो’ : रौनियार
Posted by Anup Subedi | १९ चैत्र २०७४, सोमबार १२:५५ |
छोटेलाल रौनियार, सेयर विश्लेषक
सरकारले श्वतपत्र जारी गरिसकेपछि सेयर बजारमा पहिरो गएको छ । श्वतपत्रमार्फत् सेयर बजारमा सम्बोधन हुने आशामा बसेका व्यवसायी र लगानीकर्ताहरु निराश भए । हिजो मात्रै सेयर बजारमा दोहोरो अंकले मूल्य घटेको छ । श्वतपत्रमा सेयर बजारलाई सम्बोधन भएको छैन । सेयर बजार सतही भएको, पारदर्शी नभएको श्वतपत्रमा उल्लेख थियो । डिकुटी नै रित्तो रहेको श्वतपत्रमा उल्लेख भएपछि सेयर बजार ओरालो लागेको हो । यसै विषयमा सेयर विश्लेषक छोटेलाल रौनियारसँग गरेको कुराकानी–
० अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वतपत्र र सेयर बजार सम्बन्धित हुन् ?
– केही सम्बन्ध त छ, किनभने पूँजी बजारमा लगानीकर्ताले श्वतपत्रमार्फत् सरकारको प्रतिबद्धता आउला भन्ने आशा गरेका थिए । प्रत्यक्ष रुपमा आउनुपर्ने अप्रत्यक्ष रुपमा आएकाले धेरै लगानीकर्ताले बुझेनन् । श्वतपत्रमा सकरात्मक कुराहरु पनि छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सकरात्मक कुरा दिएता पनि कन्जुस्याइ गरेजस्तो देखिएको छ । दिल खोलेर सकरात्मक कुरा श्वतपत्रमा उल्लेख गरिदिएको भए पूँजी बजारमा राम्रो म्यासेज जान्थ्यो ।
० सकरात्मक कुरा के छ ?
– राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरुलाई अधिकार दिइएको छ । बैंकहरुले विदेशबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ ल्याएर तरलता हटाउने, त्यो पैसा सस्तो ब्याजमा उद्योगधन्दाहरुलाई ऋण दिने । ब्याजदर सस्तो भयो भने पूँजी बजारलाई पनि सहुलियत हुने थियो । धेरै सकरात्मक कुराहरु छन्, यसले दीर्घकालमा पूँजी बजारमा राम्रो प्रभाव पार्छ ।
श्वतपत्रमा अर्थमन्त्रीले पूँजी बजार संकुचित भयो भन्नुभएको छ । बैंकिङ र फाइनान्स सेक्टर बढी छ, हाइड्रो, होटल क्षेत्र पनि छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी छैन । यी उद्योगहरुलाई पूँजी बजारसँग जोड्नुपर्छ ।
० सेयरको मूल्य घटना कति लगानीकर्ता नोक्सानीमा परे ?
– पूँजी बजारमा ३० लाख लगानीकर्ता छन् । कृषि विकास बैंकमा २ लाख लगानीकर्ता छन्, ग्लोबल आईएमइ बैकमा २ लाख लगानीकर्ता र नेपाल बंगलादेश बैंकमा ९० हजार लगानीकर्ता छन् । डिम्याटको मात्र ११ लाख लगानीकर्ता छन् । सेयरको मूल्य घट्दा ३० लाख लगानीकर्ता प्रभावित हुन्छन् । २१ खर्बको पूँजी बजार अहिले घटेर १३ खर्बमा आइसक्यो । झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ नेपाली लगानीकर्ताको नोक्सानी भयो । यो भनेको पूँजी बजारलाई ठूलो धक्का हो । त्यसो त कांग्रेसको सरकार हुँदा यो झर्न थालेको थियो ।
Previousरत्ननगरस्थित सुब्बाचोकमा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना
Nextमुडाले हिर्काएर श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरे !
६ माघ २०७४, शनिबार ०७:५८
संविधान दिवसमा कांग्रेसको पत्रकार सम्मेलन, सरकारको आलोचना
३ आश्विन २०७५, बुधबार १७:१७
एड्सबाट २४ जनाको मृत्यु
२० चैत्र २०७५, बुधबार १५:३७
मोदी पशुपति पुगे, मन्त्री अधिकारीद्धारा स्वागत
२९ बैशाख २०७५, शनिबार १२:१९